Magaalada Jowhar oo ka furmay Shir ku sabsan Arrimaha Dastuurka - Awdinle Online
Magaalada Jowhar oo ka furmay Shir ku sabsan Arrimaha Dastuurka
March 2, 2020 (Awdinle Online) –Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ayaa maanta ka daahfurtay magaalada Jowhar ee Xarunta Hirshabelle Ololaha Wacyigelinta ee dib-u-eegista Dastuurka, waxaana ka soo qayb galay in ka badan 100 qof oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalda Jowhar.
Kulankaan oo socon doona muddo saddex maalin ah waxaa lagu soo bandhigi doonaa cutubyada dib-u-eegista lagu sameeyay iyadoo dirradda lasaarayo arrimaha u baahan wada xaajoodyada siyaasadeed sida awood qaybsiga, maqaamka caasimadda, hannaanka cadaaladda, hannaanka maaliyadda, aminga
iyo khayraad wadaagga.
Agaasimaha wacyigelinta wasaaradda dastuurka XFS Abdikani Ali Adan ayaa ugu horrayn sharaxay ujeedooyinka kulanka wacyigelinta dib-u-eegista dastuurka, waxa uu sheegay in ujeedadu tahay in
dadka ku nool jowhar ay aragtidooda ku biiriyaan dib-u-eegista dastuurka islamarkaana ay fahmaan qodobadda ku jira dastuurka ee u baahan in heshiis siyaasadeed laga gaaro.
“ Waxaa sharaf u ah dadka reer hirshabelle in ay aragti ku yeeshaan geedi socdka dib-u-eegista dastuurka, maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho, Dastuurku wuxuu ku meel gaarka uga bixi karaa
in sidaan oo kale loola tashto dadka fikradohoodana ay ku daraan” ayuu yiri Wasiir Saadaq Mukhtaar.
Dadakii ka soo qayb galay kulanka ayaa su’aalo laxiriira maqaamka caasimadda, awwod qaybsiga, qoondada haweenka, iyo arrimo kale waydiiyay khuburada ka socday wasaardda dastuurka.
Kulankaan ayaa ah kulankii saddexaad oo ay qabato wasaaradda dastuurka, iyadoo kulammo nuucaan oo kale ah lagu qabtay Banaadir iyo Baydhabo, waana olole baahsan oo lagu qaban doono dhammaan dowlad goboleedyada.
Previous articleGuddoomiyaha Golaha Shacabka oo dalka dib ugu soo laabtey
Next articleMaqaal:-Waa maxay sababaha hoggaanka Ahlu-Sunna ku ka lifay in ay qaatan go,aan lama filaan ah?